Ungadinga Isazi Sokumaketha Nge-imeyili Uma ...
Lokhu okuthunyelwe kuhloswe ukuba kube ngumthombo walabo okuthi, ngokusobala, bazi ukuthi bangathola inzuzo ethe xaxa esiteshini se-imeyili. Akunandaba noma ngabe uthatha isinqumo sokuqasha abasebenza ngaphandle, njenge i-imeyili ejensi yezentengiso, noma ithalente elisendlini; lo mhlahlandlela uzokusiza ukuhlola nokuhlaziya kabusha imizamo yakho yamanje yokuthengisa nge-imeyili.
Ake sibheke izinombolo
I-imeyili ibingumsebenzi wokumaketha iminyaka eyishumi, futhi akunakwenzeka ukuthi kushintshe maduze nje. Ivumela ukukhonjwa ngoba kuqhutshwa idatha. Ishayela ukuthengisa okuqondile. Kwakha ubudlelwano, ukwethembeka nokwethembana. Iphinde isekele ukuthengisa ngezinye iziteshi eziqondile:
Ngokusho the Inhlangano Yezentengiso Eqondile, ukumaketha nge-imeyili kukhiqize i-ROI engu- $ 43.62 yedola ngalinye elichithwe kulo, lokho kuphindwe kabili kwalowo owagijima isibili.
Isifinyezo sika MarketingSherpa ithi, Labo ababona ukusebenza kwezinhlelo zabo ze-imeyili zincipha maningi amathuba okuthi babe nemibono yenhlangano emfushane ngaleli qhinga. Izinhlangano ezinokubukwa okugxile ekutshalweni kwe-imeyili zivuna imivuzo.
The Umkhandlu we-CMOUmbiko we-Marketing Outlook '08 ubuyekeze izinhlelo nemibono yabakhangisi abangama-650. Ukumaketha nge-imeyili bekuyindawo ephezulu ebhekiwe yokutshalwa kwemali.
Ekuhlolweni kwabathengisi, Thenga.org wathi "i-E-mail iyindlela esetshenziswe ngempumelelo kunazo zonke okukhulunywa ngayo".
Ukuphatha Ukuthengisa Nge-imeyili Ngaphakathi?
Uma ungenabo ubudlelwane obukhona be-ejensi noma unethalente elanele endlini, cabanga ngalokhu:
Wena (okusho ukuthi wena noma iqembu lakho) niyalazi ibhizinisi lenu; Ngabe unolwazi oluhle lokukhangisa nge-imeyili?
Uma kunjalo, unayo isikhathi namandla okwenza amandla akho?
Ingabe ukumaketha kwakho okuhlanganisiwe neCRM kuqhathaniswa kanjani nabancintisana nabo?
Ingabe ukumaketha kwakho kwe-imeyili kuqhuba ukuthengisa, kwakha ukwethembeka, futhi kunciphise izindleko zokumaketha?
Ingabe uhlelo lwakho lwe-imeyili lusekelwe ocwaningweni kanye / noma kumininingwane yomlando?
Ingabe umsebenzi wakho wangaphakathi uyakonga noma ukubiza imali?
Uma usuvele unayo inkampani yezentengiso noma olunye usizo lwangaphandle, zibuze:
Ngabe bagxila ku-imeyili noma bangabo isevisi ephelele?
Ngabe bakhiqiza i-ROI ehambisana nokutholakele okungenhla?
Ingabe bacabanga ngathi ngaphandle kokuqhutshwa?
Ngabe bayayiqonda yini imakethe yethu kanye nezinqubo zebhizinisi lethu?
Ngabe bahlole futhi benza imali ngazo zonke izinketho?
Ngabe umsebenzi wabo wenzelwa okusha, okuthokozisayo, nokukhombisa imikhuba emihle?
Izingcezu ze-imeyili Marketing Equation
Ukumaketha nge-imeyili kungabandakanya ukutholwa kwamakhasimende, ukukhuliswa okuholayo, ukuvuselelwa kwamakhasimende nokugcinwa, futhi nokuthengiswa okuqondile, okusho ukuthi izinqubo nezinsizakalo eziningi zingabandakanyeka, kufaka phakathi:
Kopisha Ukubhala Nokuthuthukiswa Kokuqukethwe
Idizayini nokufaka amakhodi
Bhala uhlu lokukhula nokwakhiwa komphakathi
Ukuhlukaniswa kohlu nokuthuthukiswa kohlu
Amaphrofayili wokuziphatha nokuziphatha kwamakhasimende
Ukulethwa Komlayezo Nokuqapha Ukulethwa
Umhlinzeki Wensizakalo Ye-imeyili (i-ESP) noma Ukuhlolwa Kwesixazululo Sangaphakathi Kwamakheli
Hola Ukukhulisa & Ukuthengisa Okuqondile / Okuphezulu / Kwesiphambano
Ukuhlolwa kweMultivariate nokuSebenza Kwezinhlelo
Uma uhlu olungenhla luhlanganisa okungaphezulu kunokwenzayo, lokhu kungaba yinkomba enamandla yokuthi usebenzisa lesi siteshi esinenzuzo eningi. Mhlawumbe sekuyisikhathi sokuba umlingani omusha wokumaketha noma mhlawumbe udinga ukwaba kabusha amabhajethi kanye / noma unikeze iqembu lakho elingaphakathi ukuqeqeshwa okwengeziwe?
Uma (ngokusemthethweni) unqume ukuthi udinga usizo, hlala ubukele. Esitolimende sesibili nesokugcina sizoxoxa ngokuthi INDLELA yokuthola nokuhlaziya ithalente elifanelekile elifanela izidingo zakho ezihlukile futhi elihlangabezana nemikhawulo yakho yebhajethi.
Tags: umkhandlu we-cmoukuhlanganiswa kwe-crminhlangano eqondile ye-marektingi-imeyili nokudayisai-imeyili crmukuhlanganiswa kwe-imeyiliimeyili MarketingIsikhungo Sokumaketha nge-imeyiliisazi sokumaketha nge-imeyiliukubuyisa ukumaketha nge-imeyili ekutshalweni kwemalii-imeyili nokwenza kahlei-imeyili roiMarketingSherpatekutsengisashop.org
Akubona Bonke Ochwepheshe be-SEO Abadaliwe Abalinganayo
Jan 8, 2010 ngo-3: 10 PM
UScott - lokhu engikuthandayo kakhulu kuze kube manje. Iseluleko esesabekayo! Izinkampani eziningi kakhulu zilwa nezinsizakusebenza ezinazo futhi azifinyeleli emandleni azo. Yilapho ukusebenzisana nochwepheshe kuhlala kuyisinqumo esihle njalo!
Jan 8, 2010 ngo-3: 41 PM
Ngiyabonga Doug! Engxenyeni yesibili ngizobeka imigomo engu-8 eqondisayo yokuqasha uchwepheshe wezentengiso we-imeyili.